Soo-saareyaasha Soo-saareyaasha Naafada ah ee 'Smart Pet Feeder - China' Warshadda Quudiyeyaasha ee 'Smart Pet Feeder Feeder, Produrs'
Features Tilmaamaha ugu muhiimsan: -Wi-Fi control control - Tuya APP Smartphone programmable.-Quudi sax ah - 1-20 quudin ah maalin kasta.-Rikoodh cod & dib-u-ciyaar - ku ciyaar fariimahaaga codkaaga asmea ...
Biyo Fireedyada Smart Water SPD-2100
Features Tilmaamaha ugu muhiimsan: • Awoodda 2L - Buuxinta baahiyaha biyaha eeyahaaga • Habab laba-nooc ah - SMART / NORMALSMART: is-dhex-gala oo shaqeynaya, biyuhu ha socdaan, yareynta buuqa iyo isticmaalka quwada ...
Tuya Smart Pet Feeder - WiFi Nooc SPF2000-W-TY
Features Tilmaamaha ugu muhiimsan: -Wi-Fi Remote control - Tuya APP smartphone programmable.-Automatic & manual manual -muujinaya bandhig iyo badhammo ku saabsan gacanta iyo barnaamijka.
Tuya Smart Pet Feeder Wi-Fi Control fog oo leh Kaamiro - SPF2000-V-TY
Features Tilmaamaha ugu muhiimsan: -Wi-Fi Remote control -Tuya APP smartphone programmable.- Automatic & manual manual -muujinta tusmada iyo badhamada xakameynta iyo barnaamijyada.
Features Tilmaamaha ugu muhiimsan: -Wi-Fi control control - Tuya APP Smartphone programmable.-Quudin sax ah - 1-20 quudin maalin kasta, qaybinta 1 ilaa 15cups.-4L awooda cuntada - fiiri cuntada ...
Quudiyeyaasha Xayawaanka ee loo yaqaan 'SPF2000-S'
Features Tilmaamaha ugu muhiimsan: -Maqnaanshaha tooska ah & quudinta buuga - oo lagu dhisay muuqaalka iyo badhamada loogu talagalay xakameynta buugaagta iyo barnaamijyada. - Quudinta saxda ah - Jadwalka ilaa 8 quudin ah maalintiiba - Diiwanka codka & ...
Qufulka xayawaanada casriga ah ee Wi-Fi ee fog fog ee leh 'Camera SPF2000-V'
Features Tilmaamaha ugu muhiimsan: -Raqsinka xakameynta - barnaamijyada casriga ah programmable.-HD camera-is-dhexgalka waqtiga dhabta ah. -Qaar ka mid ah howlaha - ku hel ogeysiin taleefankaaga mobilada. -Maamulka caafimaadka - xayawaannada guryaha lagu qoro maalin kasta ...